Mikatona tsy nahavita namaha ireo olana sarotra ny NETmundial · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2019 12:34 GMT
Marianne Diaz sy Sarah Myers no olona nalefan'ny Advox manokana tamin'ny fihaonamben'ny NETmundial mikasika ny fitantanana erantany ny Aterineto, natao tamin'ny 23 sy 24 aprily 2014 tao Sao Paulo, Brezila. Mpisolo tena an'ireo fiarahamonim-pirenena sivily, ireo orinasa sy ireo governemanta erantany no nifanakalo hevitra mikasika ny fitantanana ny Aterineto amin'ny hoavy ao anatin'ny vanim-potoana taorian'i Snowden. Ity lahatsoratra ity no voalohany tamin'ny andiany natokana ho an'ilay hetsika [Rohy amin'ny teny anglisy].
Ny alin'ny 24 Aprily 2014, nifarana tamin'ny fandefasana ilay fanambarana tsara antsoina hoe Fanambaràna Iraisan'ireo Mpiara-miombonantoka tao Sao Paulo [Multistakeholder Statement of Sao Paulo, pdf].. ny fivoriana mikasika ny NETmundial. Ho an'ireo fiarahamonim-pirenena sivily, kely tsy araka ny nantenain'ny rehetra ny fanantenana hisiain'ny dingana hahatongavana amin'ny resaka zo ety amin'ny Aterineto.
Ny ampitson'io, ny fihaionana dia niantomboka tamin'ny andiany maro tamin'ireo fanamarihana mivaivay sy voasaina tsara avy amin'ireoo olo-malaza iraisam-pirenena amin'ny Aterineto misokatra. Naniry ny mpisolo tena ny fiarahamonim-pirenena sivily, Nnenna Nwakanma, mba hisy ny fifampitokisana eo amin'ireo ambaratonga rehetra ao anaty adihevitra mikasika ny fitantanana ny aterineto, izay, araka ny voalazany, dia nokikisan'ny fanangonana, ny fikirakirana ary ny fitsikilovana an'ireo fifandraisana. Nafantok'i Vint Cerf avy amin'ny Google tamin'ireo fikambanana fitantanana ny Aterineto ny fandraisany anjara, tamin'ny alalan'ny filazany fa mila apetraka ny mangaraharaha goavana sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ICANN ary ny fanamafisana ny famatsiambola ny Vovonana ho an'ny Fitantanana ny Aterineto. Tim Berners-Lee, ilay mpamorona ny Web, dia niantso ny mba hananganana aterineto tsy mitanila sy mba hiheverena ny fahalalahana maneho hevitra ho toy ny zo fototra ampiarahina amin'ny zo fiarovana ny fiainana manokana.
Ny teny hoe ‘mpiara-miombonantoka maro’ no teny nironana tamin'ny maraina (tahaka izay nasehon’ity sary fanehoana avy amin'ny Ivon-toerana ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina ity) – saingy arakaraky ny namerenana imbetsaka ilay teny no tsy nampisy lanja ny famaritana azy. Nampitandrina hatrany am-piandohana i Nnenna Nwakanma fa lasa manjavozavo “ny hevitra fampidirana ny mpiuara-miombonantoka maro ary very ny heviny.”
Nihodinkodina teo amin'ny fandraketana an-tsoratra farany ny fivoriana ireo asa tamin'ny 24 aprily, dingana iray izay nitarika ny fifandroritana mafy teny anivon'ireo mpandray anjara. Raha tokony ho fampidirana hevitra marobe tao anaty lahatsoratra no natao, naleon'ilay komity avo lenta voafantina namorona antontan-taratasy iray manakaiky ny “marimaritra iraisana” teo amin'ireo antoko marobe mpandray anjara.